PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-21 - Angenisile amalahle emikhiqizweni
Angenisile amalahle emikhiqizweni
Ilanga langeSonto - 2018-01-21 - Izindaba - THANDI ZONDI
NGUBANI owake wacabanga ukuthi ngelinye ilanga soke sizithole sifunana namalahle ngoba nakhu kuthiwa anomthelela omuhle emzimbeni. Muva nje indlela izinto esezenzeka ngayo kubukeka sengathi zibuyile emasisweni.
Ziningi izinto esizishiyile esikhathini esedlule ngoba sithi kazihambisani nesikhathi. Kuzokhumbuleka ukuthi kusadliwa ngoludala kukhona abantu abebelisebenzisa ilahle ukuhlanza ngalo amazinyo kodwa kuhambe isikhathi kwafika intuthuko, kwafika imithi yasentshonalanga yokuwasha amazinyo nezixubho.
Ziningi-ke nje nezinye izinto ebezenziwa phambilini zayekwa ngoba sekushintshe isikhathi, kodwa futhi manje okubonakala kubuyelwa emuva kuzo.
Kudala uma kuphekwa indlela ebisetshenziswa bekuba yileyo yokubilisa ukudla kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwafika ukalakateni, sajwayela ukuthosa.
Kuhambe isikhathi kwavela ukuthi chabo bo, lo kalakateni esiwudlayo kawumuhle empilweni, sase sibuyela emuva ekubiliseni. Sekunanemishini yokupheka ebizwa ngama- food steamer, eyenza ukuthi ukudla ungakuthosi, nemifino ungayibilisi ize iphume umsoco.
Lolu shintsho kalugcini nje ekudleni kodwa lukhona ngisho nasendleleni yokuzinakekela.
ISIPHUZO esifakwe i-